SECES ANTANANARIVO : Tsy misy fitsaharany ny fandrahonan’ireo mpampianatra mpikaroka hitokona
Ataon’ny mpampianatra mpikaroka ho an’ny sampana Antananarivo (Seces) kilalao tanteraka ny raharaham-pampianarana eny anivon’ny Oniversite. 10 octobre 2019
Ny mpianatra no tadiavin’izy ireo hibaby ny vokatry ny fitakiany ho an’ ny tombotsoany manokana. Tsy misy fitsaharany tahaka ny zoma voalohany mantsy ny fandrahonan’ny Seces hanao fitokonana faobe. Araka ny fanazavana Nandritra ny fivoriambe nataon’ ny Sendika ivondronan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra izay mivondrona ao amin’ ny Seces sampana Antananarivo, dia nanapa-kevitra ry zareo fa hanohy ny fandrahonana hitokona indray.
“Raha sanatria tsy misy vahaolana azo tsapain-tanana dia miroso tanteraka amin’ ny fampiatoana ny asa fampianarana sy ny fikarohana ny Seces sampana Antananarivo afaka 15 andro ”, hoy ny voalazan’ ny filohan’ ny Seces Antananarivo. Mitaky fahafaham-po amin’ny fitakiany ny mpampianatra mpikaroka, ary hatreto dia mbola tsy nahazo valiny mahafa-po izy ireo matoa mbola manambana ny hanao fitokonana ihany. Araka ny fantatra dia efa nisy ny vahaolana noentin’ ny Primatiora ary efa nandray andraikitra ny Filoham-pirenena. Heverina ho mbola tsy nahafaly azy ireo izany ka isany ho antony mahatonga ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mandrahona ny hampikatso tanteraka ny asa fampianarana sy fikarohana. Tsiahivina fa efa nanome 72 ora ry zareo ary tamin’ ny alatsinainy lasa teo no tapitra izany.
Ny faran’ny herinandro lasa teo no nanomezany an’io fe-potoana io. Nanambana ny Seces tamin’izany fa raha toa ka tsy misy ny fandraisan’andraikitry ny fanjakana hatramin’io alatsinainy io dia hiroso amin’ny fampikatsoana ny fampianarana eny amin’ny anjerimanontolo izy ireo. Raha ny zava-misy anefa hatreto dia mbola nitohy kosa aloha ny fampianarana eny Ankatso. Mbola notohizan’ izy ireo tapa-bola indray ny fe-potoana nomeny ny Fanjakana. Tsy fantatra izay zava-hiseho aorian’io fanalavam-potoana ho an’ny fitokonana io. Ny Seces anefa amin’ny maha mpanabe azy ireo dia tokony hahalala tsara fa mbola maro ny olana sedrain’ny minisitera mpiahy azy ireo amin’izao fotoana izao. Isan’izany ny tsy maintsy hampandehanana araka ny tokony ho izy ny fanadinam-panjakana bakalorea izay fantatra fa hisy fihodinana faharoa. Midika izany fa fotoana tsy tokony hanaovana fitokonana izao, indrindra raha efa nanao dingana ho amin’ny famahana olana ny fanjakana.